Archive du 20170518
Milaza ho tsy manam-bola lava izao ny fitondram-panjakana Malagasy raha nisy ny resaka tokony hanomezana fiara 4 x 4 na fiara tsy mataho-dalana ho an�ireo solombavambahoakan�i Madagasikara amin�izao Repoblika faha-4 izao.
Fanjakana Rajaonarimampianina Mpanome vahana ny kolikoly sy ny tsimatimanota
Nivoaka ny tatitra momba ny zon�olombelona sy ireo fahalalahana fototra manerantany avy amin�ny departemantam-panjakana amerikanina taona 2016.
Honor� Rakotomanana Nikarakara manokana ny avy any an-tan�na
Noraisin�ny filohan�ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honor�, tetsy amin�ny birao fiasany tetsy Anosikely omaly alarobia 17 mey maraina ireo solontenan�ny mpitarika ny fikambanana terak�i Behenjy notarihin�Atoa Rabenoro Narciss sy Lalaina Ismael.
Fanomanana fifidianana Mametraka vaomiera ifotony ny CENI
Tanjon�ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena Misahana ny Fifidianana(CENI) ny hisian�ny fifidianana mangarahara.
Asandratro ny fireneko Nandefa taratasy misokatra ho an�ny filoham-pirenena
Nandefa taratasy misokatra ho an�ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fikambanana Asandratro ny fireneko, tarihin�ny profesora James Ratsima.
Tatavanina ny moka, atelina ny�!
Dia lasa mihitsy r�ise ry Jean ny saiko mandinika ity ataonareo ity. Dia tena tatavaninareo ny moka fa ny rameva hatelinareo e ! Mirehareha ery ianareo fa mandray andraikitra sy mampihatra ny tany tan-dal�na manoloana ny fihetsika managadra ireo olona tsy tanana handrangotra, tsy tongotra hitsipaka.
Raharaha Claudine A&C Mifampiahiahy ny samy mpitsara
Tsy mazava intsony izay hiafaran�ny raharaha Claudine Razaimamonjy fa toa nafana am-boalohany ihany.
Mpanao gazety tsy manaja ny etika Handraisana fepetra, hoy ny minisitra
Namoaka fanambarana omaly ny minisitry ny serasera sy ny fifandraisam-davitra, Harry Laurent Rahajason, fa ho hentintra manomboka izao ny fanaraha-maso ny fanajana ny etika sy deontolojian�ny asa fanaovan-gazety.
Kaominina Antananarivo Renivohitra Hiara-kiasa amin�ny haino aman-jery
Na tsy avelan�ny fitondram-panjakana amin�izao fotoana hisokatra aza ny radio sy ny televizionan�ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) dia misy ny fiaraha-miasan�ny fiadidiana ny tan�nan�Antananarivo amin�ireo haino aman-jery tsy miankina eto an-drenivohitra,
Antenimieram-pirenena Miara-miasa amin�ny EISA
Niroso tamin�ny Atrikasa momba ny Vondrom-bahoaka ho an�ny Fampandrosoana izay nokarakarain�ny EISA (Ivon-toerana momba ny fifidianana aty Afrika Aostraly) ireo Solombavambahoaka ny Talata 16 mey 2017 teo.
Teren-ko masaka daholo
Io indray koa ary izao fa miha mafampana ny toe-draharaha eny amin�ny oniversiten�Antananarivo eny.
Grevy eny Ankatso Tonga namono afo ny fanjakana
Nihanafana ny rombo teny Ankatso omaly. Nitohy ary niha nahery vaika mantsy ny grevin�ny mpianatra mitaky ny hampiakarana 100% ny fampitaovana homena azy ireo isan-taona,
Alakamisy-Anativato Manao ny ataony ny dahalo, very hevitra ny fokonolona
Hatreto aloha dia mbola resabe ny fandraisana fepetra ataon�ny fitondram-panjakana foibe amin�ny fitandroana filaminana eny ambanivohitra. Mandry tsy lavo loha ary mitaintain-dava ny mponina amin�ny asan-dahalo.